Faa’iidooyinka Cunida Qaruhu U Leeyahay Caafimaadka Qofka. | alcarabiya.com
Home » Nolosha » Faa’iidooyinka Cunida Qaruhu U Leeyahay Caafimaadka Qofka.
Faa’iidooyinka Cunida Qaruhu U Leeyahay Caafimaadka Qofka.	Qaro
Cunida qaruhu wuxuu u leeyahay faa’iidooyin badan oo wax ku ool ah ka ciyaaraa caafimaadka qofka bini aadamka ah,waxaana muhiim ah inaad badsato cunistiisa adigoo qaabab kala duwan u adeegsanaayo.
Qaraha cunidiisu waxaa uu kaa caawiyaa inuu yareeyo garaacida saa’idka ah ee wadnaha.
Marka loo eego daraasad cusub oo lagu daabacay wargeyska ka hadla cunooyinka kimistariga iyo beeraha ee Mareykanka qaruhu wuxuu jilciyaa murqaha uu dhaawacyada u geysto jeermisyada.
Waxaa la ogsoon yahay in qaruhu ku yar yahay tamarta dhalisay kulka cunada dhalisa,wuxuuna ka sameysan yahay vitamin A,kaasoo qani ku ah waxyaabaha dabiiciga ah.
Cabiraanka qaraha la shiido oo la cabaa ka hor inta aan la sameyn jimicsiga jirka wuxuu kaa caawiyaa inuu yareeyo qiyaasta cudurada wadnaha,isagoo hoos u dhiga dhaawacyada murqaha.	Joogteynta cunista qaraha waxey wax weyn ka tartaa ka hortagida cudurada dhiigkarka,wuxuu sidoo kale ka hortag u yahay cudurada maskaxda ku dhaca ee loo yaqaan Stroke.
Daraasado badan ayaa tilmaamay in qaruhu uu siyaadiyo caafimaadka wadnaha. baarayaasha Mareykanku waxey daraasada ku fuliyeen haween badan,waxaaney muujisay in caafimaadka wadnaha uu cadeeyey isbedel weyn kadib lix todobaad oo joogto ay u cunayeen qaraha si joogto ah.
Daraasada cusub waxaa lagu ogaaday in qaruhu qeyb weyn ka qaato horumarinta rabitaanka jinsiga ragga,
5 Responses to Faa’iidooyinka Cunida Qaruhu U Leeyahay Caafimaadka Qofka.	Jaabir yare Reply
November 3, 2013 at 7:38 pm	Asc dhaman aqyarka ku sugan halkan wan idin salamay qalan qali ah sida an u maleynayo qaruhu wa muhin hadu yareynayo garacista wadnahay ama sifeynayo kiliyahay
October 7, 2013 at 1:04 pm	asc wad mahad san tihiin
September 27, 2013 at 11:06 am	asc . marka hore waad mahadsan tihiin alcarabiya sida wacan.ee aad nala socodsinaysan. arimaha bulshada.halka ka siwada dadaalkina.
September 21, 2013 at 3:28 am	waadku mahad santihiin arimaha bulshada waxtarka u leh waa loo baahan yahay inlaga hadlo..
September 17, 2013 at 11:13 am	Asc ad iyo ad ayeynu ugu mahad celineyna hadeynu nahay shacabka so maliyed wabsetka alcarabiyaha sida wcn o ay no gu so gud binayan arimaha muhimka u ah bulshada wsckm wrx wbr